युगान्डा रोजगारीका लागि जाने कि ? नेपालीलाई अब खुला हुने – Non Resident Nepali Association KSA
युगान्डा रोजगारीका लागि जाने कि ? नेपालीलाई अब खुला हुने
बैदेशिक रोजगारीका लागि एकपछि अर्को गन्तव्यमा जटिलता आइरहेकै बेला बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहाने नेपाली युवाहरुका लागि खुसीको खबर आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि अब अफ्रिकी मुलुक युगान्डा खुल्ला भएको छ । व्यवसायीले युगान्डाबाट दक्ष कामदारको माग ल्याएपछि सरकारले हालै यो मुलुक रोजगारका लागि खुल्ला गरेको हो । दक्ष कामदारका लागि राम्रो तलब र सुविधा पाइने भएकाले युगान्डा धेरैका लागि आकर्षक हुने बताइएको छ ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सो बिषयमा जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले युगान्डालाई बैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यका लागि सूचीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत चैत ३१ मा श्रमले युगान्डा खुल्ला गर्ने मन्त्रालयस्तय निर्णय गरेको हो । युगान्डामा पहिलो पटक दक्ष कामदारको माग सुवास विजय एशोसिएट्सले ल्याएको थियो । उक्त कम्पनीले कामदार पठाउने माग गरेपछि मन्त्रालयले नयाँ रोजगार गन्तब्य खुल्ला गरेको हो ।
सुवास एसोसिएट्सले युगान्डाको कामपाला सहरमा रहेको क्रेन बैंकका लागि विभिन्न क्षेत्रका दक्ष कामदारको माग ल्याएको छ । श्रमले अनुमति दिए लगतै वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्विकृती दिइसकेको छ । म्यानपावरले उक्त बैंकका लागि सस सेफ, एकाउन्टेन्ट, एक्जुकेटिभ सेफ, फ्रन्ट अफिस म्यानेजर , चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, उपप्रबन्धक, फुड एण्ड बेभरेज म्यानेजर र हाउस किपिङ एक्जुकेटिभको माग ल्याएको छ । यी मध्ये सस सेफले सबैभन्दा कम मासिक ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउँछन् भने अधिकतम एक्जुकेटिभ सेफ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मासिक १ लाख ४३ हजार पाउने कम्पनीले जनाएको छ।
कामदारलाई दुई वर्षको करार अवधि रहेको कम्पनीले जनाएको छ। युगान्डा जाने कामदारका लागि भिसा र हवाई टिकट निशुल्क पाउने छन् । कम्पनीका प्रोप्राइटर बीएन पराजुलीले युगान्डामा अहिले सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगाको सम्भावना बढी रहेको जानकारी दिए । ‘युगान्डा पुर्ननिर्माण तीब्र भएको मुलुक हो,’ उनले भने, ‘यहाँ दक्ष कामदारको माग उच्च छ ।’
‘धेरै भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले युगान्डामा काम गरिरहेका छन्,’ , ‘बैंकिङ र पर्यटन क्षेत्रमा कामदार पठाउन कस्तो सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल बैदेशिक रोजगार संघले पनि युगान्डा बैदेशिक रोजगारीका लागि खुला हुनु सकारात्मक भएको बताएको छ । सधै अदक्ष कामदार पठाइरहने भनेर लाग्ने गरेको आरोपलाई युगान्डामा आएको यो मागले असत्य सावित गरेको छ ।
‘युगान्डामा आएको मागले नेपालमै कम तलबमा काम गर्नेलाई अवसर प्राप्त हुनेछ,’ ‘यहाँको दक्ष जनशक्ति विदेश जान्छन् भने यहाँ रोजगाको अवसर खोजिरहेकाले यही काम पाउँछन् । यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ।’ नेपालबाट जाने कामदारमध्ये ९० प्रतिशत अदक्ष छन्।
यस्तो छ युगान्डा
अफ्रिकी मुलुक युगान्डा भुपरिवेष्ठित हो । यसको पूर्वमा केन्या, उत्तरमा सुडान, पश्चिममा कन्गो र दक्षिणमा रुवाण्डा र तान्जनिया पर्छन् । यहाँको बहुसख्यंक (८५ प्रतिशत) जनता क्रिस्चियन धर्मालम्बी छन । छिमेकी मुलुकका तुलनामा युगान्डालाई शान्त र सहिष्णु मानिन्छ । भूमध्य रेखाको नजिक पर्ने भए पनि यहाँको मौसममा एकरुपता छैन । मुलुकको उत्तरी भेगको तुलनामा दक्षिणमा बढी सुख्खा र गर्मी हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म संसारकै गरिबतम मुलुकका रुपमा रहेको युगान्डा आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू गरेपछि सुधारको दिशामा लागेको हो । सन २००८ मा यसको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत थियो । धातु खानी, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो । लामो समय चलेको गृह युद्ध समाप्त भएपछि युगान्डामा अहिले पुर्ननिर्माणको काम तीब्र भएको छ । यो मुलुकमा अहिले होटल, बैंक, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा रोजगाको अवसर छ । यहाँ अहिले भारत, चीन लगायत मुलुकका व्यवसायीले लगानी गरिरहेका छन्। १५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र रहेको युगान्डामा सेवा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५२ प्रतिशत सेवा, २५ प्रतिशत पर्यटन र २३ प्रतिशत कृषिको योगदान छ ।
4 thoughts on “युगान्डा रोजगारीका लागि जाने कि ? नेपालीलाई अब खुला हुने”
jana ko lagi k kasto process chalna parne ka vanna parne ho …sampark garne thau vaye dekhi sajilo hune thiyo….thankyou!
samachar paiyo tra yesma jana ko lagi kasto process garnu parni ho ani kun manpower ma contract garnu pa6a janna pay ramro hunthiyo?
yasko lagi mahile kamdar jana pau6 ki paudaina ra jana ko lagi kasto process garnu par6?
समाचार पाइयो तर यस्मा जान को लागि के पहल गर्नु पर्छ कृपया जान्न पाए आभारी हुन्थे । । । ।